မြည်တွန်တောက်တီးတတ်ခြင်း အပေါ် မြင်မိသော အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မြည်တွန်တောက်တီးတတ်ခြင်း အပေါ် မြင်မိသော အမြင်
မြည်တွန်တောက်တီးတတ်ခြင်း အပေါ် မြင်မိသော အမြင်
Posted by mamanoyar on Jul 2, 2012 in Ideas & Plans | 19 comments
စိတ်အလိုမကျခြင်းအတွက် တစ်ပျစ်တောက်တောက် မြည်တွန်တောက်တီး ခြင်းသည် အလွန်ပင်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသော အပြုအမူဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်းတွင် စိတ်အားငယ်စရာ၊စိတ်ပျက်စရာ၊ စိတ်အလိုမကျစရာများ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေကြပါသည်။ မိမိတစ်ယောက်ထဲ ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ထိုကဲ့သို့ ကိုယ့်စိတ်အလိုမကျတိုင်း အော်ကျယ်ကျယ်နှင့် မြည်တွန်တော်တီးနေမည်ဆိုလျှင် ကြားရသူတိုင်း စိတ်မချမ်းမြေ့ ဖြစ်ရပါသည်။ မည်မျှပင် ပျော်ရွှင်နေစေကာမူ ထိုကဲ့သို့သော စိတ်ညစ်စရာ မြည်တွန်တောက်တီး မှုများကို ကြားနေရပါက မိမိပျော်ရွှင်မှုများပင် ပျောက်ပျက်ကာ စိတ်နှလုံးမသာမယာ ဖြစ်ရပါသည်။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်နေသော လူအများစု စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရမည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။
အချို့သော လူကြီးများသည် မိမိ တွင် ရာထူးဂုဏ်ရှိသည် မည်သူ့မျှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဟုထင်တတ်ကာ မိမိအလိုမကျတိုင်း အော်ငေါက်တတ်သော အကျင့်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနေ့များတွင် မိမိလက်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်နေကြသော လူအားလုံး ထိုနေ့အဖို့ စိတ်မချမ်းသာ ဖြစ်ကြရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်အား ပြောနေခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၊ အပြစ်ရှိသူတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ သော မြည်တွန်တောက်တီးသံ များကို ကြားရသူအပေါင်း စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကြရမည်။
ထို့ကြောင့် မိမိတွင် မည်သို့သော အခက်အခဲ၊ အလိုမကျမှု များရှိစေကာမူ မိမိနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို အားနာမှုရှိရမည်ဖြစ်သည်။မိမိသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တတ်သူ ဖြစ်လင့်ကစား တစ်ယောက်ထဲနေ၍ မရသော လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆင်ကျင်စရာများစွာ ရှိနေပေသည်။ မိမိတွင် စိတ်ညစ်စရာများစွာ ရှိနေသဖြင့် လူတစ်ဦးဦးထံ ရင်ဖွင့်သည်ဖြစ်လင့်ကစား အချိန်တိုင်း တတွတ်တွတ်နှင့် ညည်းငြူပြောနေခြင်းသည် တစ်ဖက်သားအား ကူညီဖြောင့်ဖျလိုစိတ် လျှော့နည်းစေသည့်အပြင် ဥပေက္ခာပြုစေနိုင်သည့် အဖြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သို့သော အလိုမကျမှုများ ရှိစေကာမူ မြည်တွန်တောက်တီး ခြင်းမျိုးမပြုပဲ သွေးအေးအေးနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်သင့်ပါသည်ဟု ကျမထင်မိပါသည်။
ကိုယ်တွေ့ကြုံရမှုအပေါ် မိမိစိတ်နှင့် အခြေခံ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်၍ အမှားရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ကြစေလိုပါသည်။
ဂွမ်း တစ်ထုပ်လောက် ဝယ်ပို့လိုက်မယ်နော်…
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဖားသက်ပြင်း ဆိုတဲ့လူ ကို သတိထားပေတော့..
သည်လူက ဖလားလွတ်ကျလို့ ..ဘယ်သူ့ ဆဲရမလဲ လိုက်ရှာနေတာဗျ
မြည်တွန်တောက်တီးတတ်ခြင်းက ပိုက်ဆံရှိပြီး အာဏာလည်းရှိသူ ၊ အထက်လူကြီးနေရာကို ရထားသူတွေ မရှိမဖြစ်ရှိနေတတ်တဲ့ ဂုဏ်မောက်ခြင်း အပြုမူပါပဲ ။ အဲ့လို လူကြီးတွေနားမှာ နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း … ဘာမဆို ခေါင်းငုံ့ခံမယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုးတွေ ရှိနေလို့ … ဒီလူကြီးတွေ ပါးစပ်ထဲ ရှိတိုင်း မြည်တွန်ခွင့်ရနေကြတာပါ ။
မဟုတ်လျှင် မခံ ၊ တာဝန်နဲ့ မသက်ဆိုင်တာမျိုးပြောခံလျှင် ပြန်ခံပြောတတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းမျိုးသာရှိကြည့် … ဟီး .. အလုပ်ပြုတ်မှာ .. ။ ဒါပေမယ်လည်း ဘလိုင်းကြီးခံပြောလို့ အလုပ်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ခေတ်တော့ သိပ်မရှိတော့ဘူး .. မီဒီယာလက်နက်တွေ အစွမ်းကြောင့်ပါ ။
မြည်တွန်တောက်တီးခြင်းကို လူချမ်းသာတွေပဲ လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး မမနိုရာရေ ..ကျွန်မလို အညတရလည်း လုပ်တတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို မြည်တွန်လိုက်ရမှပဲ ..ရင်ထဲပေါ့သွားသလိုပါပဲ .. ဟိဟိ … ။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က စိတ်မချမ်းသာဖြစ်မဖြစ်တော့ … အဲ့တုန်းက သတိမထားခဲ့မိဘူး အခုမှ သတိထားရတော့မယ် … ဟိဟိ
ကျုပ်တို ့အတွက် အရမ်းအကျိုးရှိတာဘဲ
ကျော့် ဘောဇိကြီး ဖတ်မိပါစေဗျာ
လူကြီးတွေမှ မဟုတ်ဘူး..ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းလည်း စိတ်ညစ်ရတယ်..မကျေနပ်ရင် ပေါ်တင်သွားရှင်းတာ မဟုတ်ဘူး… အနားလာပြီး ပွစိပွစိနဲ့..ရင်ဖွင့်တာဆိုရင်လည်း ပြေရာပြေကြောင်း ပြောရတာ တော်သေးရဲ့..တစ်ခါတစ်လေကျတော့ သူ့ဘာသာသူ ဒေါသထွက်လို့ စကားရိုင်းရိုင်းတွေ တစ်ယောက်တည်း ပြောနေရင် ဘေးကလူကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်…
I don’t leave the company, I leave the manager. တဲ့…
ရှိုက်သံတွေကြားက …မပီမသ ဗယာကြော်လို့ ..ရွတ်သွားပါတယ်အေ..
ကိုယ့်အထက်ကလူကိုမပြောရဲတော့ ကိုယ်နိုင်တာ ခံရတဲ့ကလေးကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာ။
ကျနော်က တော့ ပြောစရာရှိရင် တစ်ခါထဲ တစ်လုံးတစ်ဝကြီး အပြည့်ပြောထဲ့ပြီးရင် ထပ်မပြောတော့ဘူး။
ကောင်းပါ့…ဒါပေမယ့် မွန်မွန်တို့လို အငယ်တွေကျတော့ ပြောကြတယ်လေ…ရိုင်းလိုက်တာ တဲ့…စိတ်ထဲမှာ ရှိတာကိုသာ တစ်လုံးတစ်ဝကြီး ပြောလို့ရလို့ကတော့… …
ဒါမှမဟုတ်ပဲ သူစိတ်အလိုမကျတိုင်း မြည်တွန်နေမယ်ဆိုရင်တော့
ကာလဒေသနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေရှိအောင် ကျင့်ကြံခဲ့ရတဲ့အခါတွေလဲ ရှိပါတယ်ဗျာ။
မှန်ပါတယ် ကာလဒေသအလိုက် လိုက်လျှောညီထွေး ဖြစ်အောင်
ပြောဆိုရတာရှိပေမယ့် တစ်ချို့က တစ်ချိန်လုံး တစ်ပျစ်တောက်တောက်နဲ့
ပြောဆိုနေလိုက်ကြတာ မပြီးနိုင်ပါဘူး တစ်ခါတစ်လေ သူတို့အိမ်တွင်းရေး
ကိစ္စအဆင်မပြေတာနဲ့ ကိုယ့်လက်အောက်ကလူတွေ ပတ်ရမ်းတတ်တာတွေလည်း
ကဲ ကဲ ကျုပ်ကိုစောင်းပြောနေတာတွေရပ်လိုက်ပါတော ့
အသက်ကြီးလာလေ ပွစိပွစိ များလေမို ့ပါ ဟဲဟဲ
အပြင်ထွက်လို. လမ်းပေါ်မှာ ပေါက်ကရလုပ်တာတွေ တွေ.ပြီး ကိုယ်.စိတ်နဲ. အဆင်မပြေရင်တော. မှန်ပိတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း မြည်တွန်တောက်တီးပြီး ဆဲနေတာက ပိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော. ပြဿနာတွေ ရှင်းလို. ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီလိုလူမျိုးတွေ အရင်ကလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ အတော်ကို ဆိုးဝါးတာတွေလည်း တွေ့ရှိရတယ်။ မနောလို လုပ်လေ… သူ ဘာပြောပြော သူ့ကို ရယ်ပြနေလိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့စိတ်က မြည်တွန်တောက်တီးဖို့ မေ့လျှော့သွားပါရော… နောက်ဆုံး ဆူမယ်ကြံတိုင်း ရယ်ပြနေလိုက်တာ ဒီကောင်မလေးတော့နော် ဆိုပြီး မဆူမပြောတော့ပါဘူးတဲ့ရှင်…. သူ့ဝသီ သူ့ဗီဇလို့ မြင်မိတာပါပဲ။ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လည်း လိုတာပေါ့နော်။ ကြာလာတော့ ထူလာတယ် အဟဲ… နောက်တော့လည်း ရိုးသွားမှာပေါ့လေ… သူမှ မပြုပြင်တာ ကိုယ်ပဲ နေတတ်အောင် ကျင့်ရတော့တာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။
မမ မနောရေ သူအဲလိုလုပ်လို့ ရယ်ပြနေမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း
ရယ်ပြဖို့တော့မပြောနဲ့ ဘယ်နေလို့နေရမှန်းတောင် မသိ
ကိုယ်ကပြောခွင့်မရ သူတို့ပြောချင်ရာပြော သူတို့ဆူချင်ရာဆူပြီး
အတော်ကောင်းတဲ့စာသားပါ ကျွှန်မနဲ့လဲ တော်တိုက်ဆိုင်စာသားလေးပါ
မြည်တွန်တောက်တီးတာတော့ လူတိုင်းလို မကျေနပ်ရင် မြည်တွန်ကြတာပါ
ဒါပေမဲ့ မှား မှန်ကိုတော့ခွဲခြားစေလိုတယ် တဘက်လူကို ကိုပြောလိုက်တဲ့
စကားက သူများကိုဆုတ်ယုတ်နစ်နာစေသောစကားများကို မပြောသင့်ပါ
ငါနိုင်တယ် ငါပြောလိုက်ရင်သူဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အနိုင်ယူလိုစိတ်နဲ့
တော့တခြားလူကိုနိုင်ရတာကိုမကျေနပ်ပါနဲ့ …တကယ်တော့ ကို့အောက်
နိမ့်သူရဲ့ ကြောက်လို့လေးစားတာခံချင်ပါသလား …ချစ်ခင်လို့လေးစားတာ
တကယ်တော့မှားလား မှန်လားဝေဖန်ပီးမှမြည်တွန်တောက်တီးပါ …လူကြီးများရှင့်
ပြေမှပြန်တောင်းပန် ရင်တော့ သင်နောက်ကျသွားပီပြောသူတာဒေါသပြေနိုင်ပေမဲ့ပြောခံ
ရတဲ့သူကတော့တော်ကိုနာကြည်းနေတယ်ဆိုတာ သိထားပါ လူကြီးများသတိထားစေလိုပါတယ်
ဒေါသဖြစ် ရင်တော်တော်များများ ….အမှားပါတတ်ပါတယ်